कबीर सिंहः प्रेम र बर्वादीको मर्मस्पर्शी कथा - Saptakoshionline
कबीर सिंहः प्रेम र बर्वादीको मर्मस्पर्शी कथा
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ १२, २०७६ समय: १:५५:४२
एक दृश्यमा कबीर सिंह (शाहिद कपूर) भन्छन्, ‘जिन्दगीमा तीन घटना नै राम्रो हुन्छ-जन्मनु, प्रेममा पर्नु र मर्नु ।’
चलचित्र एक यस्तो दृश्यसँग सुरु हुन्छ, जहाँ एक पुरुष र महिला ओछ्यानमा सुतिरहेका हुन्छन् । पछाडिबाट समुन्द्रको तिब्र छालको आवाज आउँछ । त्यही छालको आवाजसँगै हामी कबीर सिंहको तुफानी जिन्दगीमा प्रवेश गर्छौ ।
उनी एक मेडिकल सर्जन हुन र फुटबल च्याम्पियन पनि । उनी कलेजका टपर हुन् । पढाईमा मेधावी । पढाईमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै अब्बल पनि । कलेजको फुटबल टिमको कप्तानी उनैले सम्हालेका छन् । यद्यपी उनी भित्रभित्रै थुप्रै समस्यासँग पनि जुधिरहेका छन् । सायद यही कारणले हो कि, उनी निकै रिसाह छन् । उनलाई रिस उठिरहन्छ । झोंकी छन् ।
कबीर सिंहको नजर जसै प्रीति (कियारा आडवाणी)माथि पर्छ, ऊ बिद्रोही बन्छ । यस्तो विद्रोही जसको एक लक्ष्य पनि छ ।
प्रीतिले पनि कबीरलाई आफ्नो मनको कुरा पोख्छिन् । तर, उनीहरुको सम्बन्ध लामो समय टिक्दैन । त्यसपछि कबीर बर्बादीतर्फ लाग्छन् । मदिरा, नसा र सेक्सको दलदलमा फस्छन् । यसैबाट उनी आफ्नो दुःख भुल्ने कोसिस गर्छन् ।
कबीर सिंह तेलुगू फिल्म अर्जुन रेड्डीको हिन्दी रिमेक हो । तेलुगू फिल्ममा विजय देवरेकोंडा र शालिनी पान्डेले चलचित्रको प्राण धानेका थिए । शाहिद कपूरलाई मुल चलचित्रको हरेक प|mेममा जस्ताको तस्तै उतारिएको छ । पहिले बनिसकेको चलचित्रलाई निर्देशक सन्दीप वांगा रेड्डीले नयाँ दर्शकका लागि थप स्वादिलो बनाएको छ ।
कबीर सिंहमा धेरै कुराको अभाव छ । उनी पियक्कड हुन् । सुन्दरीप्रति हुरुक्कै हुन्छन् । उनी एक झोंकी प्रेमी हुन् । तर, उनी कसरी यस्तो भए ? के कारणले उनलाई यो मोडमा ल्याइदियो ?
कबीरका भाई आफ्ना हजुरआमासँग भन्छ कि कबीरलाई सहयोग गर्नुहोस्, उसको दुःखमा साथ दिनुहोस् । हजुरआमा भन्छिन् कि दुःख कहिल्यै कसैले कम गर्न सक्दैन । सबैले आ-आफ्नो दुःख झेल्नुपर्छ । आफ्नो भागको दुःख आफैसँग हुन्छ ।
चलचित्र हेरिरहँदा तपाईं कबीर सिंहको रुपमा आफुलाई पाउनुहुनेछ । उत्कर्षसम्मै तपाईंले चलचित्रमा आफ्नो यात्रा अनुभूत गर्नुहुनेछ । यही नै कबीर सिंहको जीत हो ।
पटकथाकारले केही दृश्यहरु भने छाडिदिएका छन्, जसले चलचित्रलाई अरु गहिरो बनाउन सक्ने थियो । यद्यपी तीन घण्टासम्म तपाईंलाई कबीर सिंहले आफुसँगै डोहोर्‍याउनेछ ।
कबीर सिंह खासमा शाहिद कपूरकै चलचित्र हो । प्रेम, आवेग, रिस, सनक, उत्साह सबै किसिमको संवेदनालाई उनले निकालेका छन् । जसरी विजय देवरेकोंडाले अर्जुन रेड्डीको हरेक दृश्यमा आफुलाई उभ्याएका थिए, त्यसैगरी शाहिदले कबीर सिंहमा आफ्नो उपस्थितीलाई जोडदार बनाएका छन् । त्यसो त तेलुगू चलचित्र नै हिन्दी चलचित्र भन्दा केही राम्रो थियो ।
जे भएपनि कबीर सिंह एक उत्कृष्ट लभस्टोरी हो । यसले तपाईंलाई प्रेमिल दिनमा पुर्‍याउनेछ । शाहिदले तपाईंको हृदयसम्म त्यो पीडा पुर्‍याउनेछ, जो अक्सर वियोगान्त प्रेममा हुनेगर्छ ।
यद्यपी यो चलचित्र पनि पूर्ण रुपमा राम्रो भन्न सकिने चाहि छैन । कतिपय गल्ती कमजोरी यसभित्र छन् । त्यती हुँदाहुँदै पनि कबीर सिंहले निरास भने बनाउने छैन ।
जाडोमा छाला जोगाउने ५ उपाय
जाडो सुरु भएसँगै धेरैजनालाई छाला फ्रुस्रो हुने समस्या हुन्छ । तापक्रममा आएको अकस्मात् गिरावटसँगै छाला तथा ओठ फुट्ने, सुख...
गायक कमल खत्रि स्टोरी अफ योगं हर्टको कस्टडीमा
इटहरी। इटहरीमा भोलि २५ गायक कमल खत्रि प्रस्तुती गर्नका लागि इटहरी आउने भएका छन । इटहरीमा रहेको पाथिभरा जब लिंक प्रालि र ...
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बहुविवाहको विवादमा मुछिएकी अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको छ ।न्यायाधीशद्वय ...
कार्तिक २९ देखि धरानमा अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव , तयारी अन्तिम चरणमा
धरान । प्रदेश १ सरकार मुल आयोजक तथा धरान उपमहानगरपालिका र स्विस बिकास नियोग र सुनसरी उधोग बाणिज्य संघ धरान सहयोगि रहेको ...